Ribbons ho an'ny fanentanana momba ny cancer
The Ribbon Awareness Pink
Ny loko mavitrika mavokely dia ekena lavitra ary marika ho fanohanana ny fanentanana kanseran'ny nono. Izany dia marika ho an'ny ray aman-dreny niteraka ary koa ny fanentanana homamiadan'ny fahazazana.
Ny fampiasana ny loko toy ny herim-po sy ny fanohanana dia azo tsapaina hatramin'ny taonjato faha-19. Nandritra izany fotoana izany, ny vehivavy dia nitondra marika mavo ho mariky ny fanoloran-tena ho an'ireo olon-tiany izay nanompo tao amin'ny tafika. Nifatotra volom-borona mavokely manodidina ny hazo ny vahoaka mba hanehoana ny fanohanana ireo mpifanolo-bodirindrina izay tsy ampy ny fianakaviany izay nanompo nandritra ny krizin'ny fidirana ao Iran. Ireo moko mena dia nalaina nanomboka tamin'ny faran'ny taona 1980 ka hatramin'ny fiandohan'ny taona 1990 ho fanohanana ny SIDA.
Tamin'ny 1992, loko roa loko no noforonina mba hanohanana ny fahatsiarovan'ny voan'ny kanseran'ny nono. Charlotte Haley, izay nibodo ny homamiadan'ny nono ary mafana fo, namorona tifitra peach ary naka fomba manokana hanatitra ilay hafatra. Ramatoa Haley dia nizara ireo tsangam-pasika tao amin'ny fivarotana fivarotana teo an-toerana ary namporisika ireo mpanohana hanoratra amin'ny mpanao lalàna azy ireo. Ny loko tsirairay dia mifatotra amin'ny karatra iray izay mivaky hoe: "Ny tetibolan'ny Tahirim-pirenen'ny National Cancer Institute dia $ 1,8 miliara, 5 isan-jato monja no miady amin'ny fisorohana ny homamiadana. Ampio izahay hampifoha ny mpanao lalàna sy ny Amerikana amin'ny fitazonana ity tady ity." Ity ezaka ity dia hetsi-bikan'ny hetsi-bozaka nangataka vola, ho fanentanana fotsiny.
Tamin'ny taona 1992, Evelyn Lauder, izay mbola velona ihany koa ny homamiadan'ny nono, dia niray hevitra tamin'i Alexandra Penney mba hamoronana loko mavokely. Ny mpivady, ny filoha lefitry ny filoha lefitra Estée Lauder, ary ny talen'ny famoahana ao amin'ny Self Magazine, dia naka fomba fijery ara-barotra ary nizara loko 1.5 tapitrisa maranitra tao amin'ny Estée Lauder mpanao tsipika. Nanangona fanangonan-tsonia maherin'ny 200.000 io mpivady io ho an'ny governemanta mba hampitombo ny famatsiam-bola avy amin'ny fikarohana momba ny homamiadana.
Androany, ny loko mavokely dia maneho ny fahasalamana, ny tanora, ny fandriampahalemana ary ny tony, ary ny dikany iraisam-pirenena dia ny dikan'ny tsikombakomba amin'ny homamiadana.
Ny lokon'ny mavokely manga sy manga
Ny olona dia mampiasa ny loko manga sy manga mba hampahatsiahy antsika fa mety ho voan'ny kanseran'ny nono ihany koa ny lehilahy. Io kombinam-pandrefesana io koa dia nampiasaina hanaiky ny fahaverezan'ny zaza iray, ny fiterahana, ny fahafatesan'ny neonatal, ary ny aretina tampoka ny zaza maty. Na dia tsy voamarika fa matetika dia toy ny kofehy mavokely amin'ny homamiadan'ny nono ny vehivavy, dia hita matetika amin'ny volana oktobra ny kanseran'ny lahy sy ny vavy marevaka manga sy manga, izay volana Mahatsiaro ny Breast Cancer Month. Ny herinandro fahatelo Oktobra dia natokana amin'ny fanentanana ny homamiadana amin'ny lehilahy.
Tu Quoque - Ad Hominem Tonizara fa Ianao No Izany!
Inona no maharatsy ny fizarana?
Ahoana ny fomba fanaovana fitaratra vintana mba hanaporofoana ny toetrandro
Ny fitsipiky ny famolavolana grafika
Fomba fianarana ho an'ny kilasy faha-12
Ahoana ny fomba fanaovana gilasy maina
Nanazava ny lahy sy vavy ary ny firaisana ara-nofo
Inona no fampirantiana amin'ny literatiora?
Ny Podcast efa ela teo aloha
Ny tari-dàlana hividianana fitaovam-pifandraisana amin'ny rindrambaiko Wi-Fi
William Le Baron Jenney, Rain'ny Amerikanina Haavoko
Fampidirana fohy amin'ny karazana amboadia rehetra
Lisitry ny famakiam-bokin'ny Summer Reading for Teen Boys
Ampaherezo io vavaka io ho an'ny reny nahafaty olona
Fanadiovana sy fanadiovana
Fantaro ireo faritra manan-tantara lehibe momba ny horohorontany amin'ny kontinanta 7
Nanana Polisy miafina nahafaty olona ny Spartanista fahiny
Hery sa Mahavariana?
Sary nohavaozina: Ahoana ny fampiharana ny fandrosoana?
Inona ny Fiteny Fiteny?
Lisitry ny Strong Strong
9 Ny mari-paha-famantarana ny oram-batravatra tonga
Fanapahan-kevitra misimisy kokoa
Ny kolotsaina maro sy ireo oniversite any Etazonia
Fitaovana - Planeta amin'ny move
Sarin'i Glenn Murcutt, Architect Aostralianina
Manontany ny ray aman-dreninao amin'ny kolotsaina
Moa ve ny Skotika Avelanao Hahazo Andraikitra Amin'ny Fitateram-bahoaka?
Tsy afaka ny hitazona ny baolina kitra tsara ianao: Top Movies Movie School Old Top 10
Mahatsiaro an'i Aaliyah